Solid-state drives ( SSDs ) and hard disk drives ( HDDs ) - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Solid-state drives ( SSDs ) and hard disk drives ( HDDs )
24-07-2010, 10:58 PM
ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းကို ရေးနေတာ ( ၅ ) ရက်လောက် ရှိပြီ - ဖတ်မယ့်သူ မပြောနဲ့ ရေးတဲ့သူတောင် ရေးရင်းနဲ့ ပျင်းလာလို့ မနည်းဆုံးအောင် အားတင်းပြီး ရေးရပါတယ်။ ပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်းကတော့ Solid-state drives လို့ ခေါ်တဲ့ (SSDs ) တွေ အကြောင်းပါ။
Solid-state drives ( SSDs ) ဆိုတာ data တွေကို သိုလှောင် သိမ်းဆည်းတဲ့ ပစ္စည်း တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပြီး သူ့ကို solid material တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ circuits တွေ - electrons တွေ - charge carriers တွေပါဝင်တဲ့ တစ်ခြား ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ SSDs တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ တစ်ခြား ပုံမှန် သုံးရိုးနေကျ hard disk drives (HDDs) တွေနဲ့ ကွာခြားသွားတဲ့ အချက်က hard disk drives (HDDs) ဆိုတာ electromechanical devices တွေ ဖြစ်ပြီး သူ့ထဲမှာ ဆိုရင် spinning disks နဲ့ movable read/write heads တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
SSDs တွေမှာတော့ hard disk drives (HDDs) နဲ့ မတူပဲ microchips တွေကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ နောက်ပြီး သူ့မှာ hard disk drives (HDDs) လိုမျိုး လှုပ်ရှားတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု တစ်လေမှ မပါဝင်ပါဘူး။ သူတို့ နှစ်ခုရဲ့ ကွာခြားချက်ကို အောက်မှာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Solid-state drives (SSDs) တွေဆိုတာ ခု နောက်ပိုင်းမှ တော်တော်လေး လူသိများ သတိထားမိလာတဲ့ Drives အမျိုးအစားတစ်ခုပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ?? ဘာလို့လဲ ဆိုရင် သူ့ကို အသုံးပြုတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ရရှိမယ့် System ရဲ့ Speed ဟာ အံ့သြဖို့ ကောင်းလောက်အောင် လျင်မြန်လာလို့ပါပဲ။
ကနေ့ခေတ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာတွေမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ hard drives ရဲ့ performance နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လှည့်ကြည့်စရာ မလိုလောက် အောင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သွားချင်တယ် ဆိုရင် မှာ ပုံမှန် သုံးရိုးသုံးနေကျ Hard drive ဟောင်း တစ်ခုကနေ solid-state drive တစ်ခုကို ပြောင်းသုံးကြည့်လိုက်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ?? ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် SSD ရဲ့ read times က အရင် Hard drive အဟောင်း တွေထက်ပိုပြီး မြန်ဆန်လာတဲ့ အတွက်ကြောင့် မို့လို့ System တစ်ခုရဲ့ boot times တွေ - applications တွေ ဖွင့်တဲ့ အချိန်မှာ ကြုံတွေ့ရလေ့ ရှိတဲ့ ရှည်ကြာဖင့်လေး မှုတွေကနေ လွတ်ကင်းပြီး မြန်ဆန် သွက်လက်စွာနဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်လာတာကို ခံစားလာကြရမှာ မို့လို့ပါ။ ဒီလိုဆို SSDs လာ လုံးဝ Perfect လား ?? အဲလိုလည်း မဟုတ်သေးပြန်ပါဘူး - SSDs နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လက်ညှိုးထိုးစရာ အချက်တစ်ချက် လည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲတာကတော့ SSDs တွေမှာ write limit ရှိနေတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒါက တကယ်တမ်း စိုးရိမ်စရာ အချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး - ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ စိုးရိမ်ရမလဲ ဆိုတော့ သူ့ ( SSDs ) ပေါ် မှာ ခဏတိုင်း system တစ်ခု မဟုတ် တစ်ခု Write ခိုင်းနေတဲ့ သူမျိုးတွေလောက်ပဲ ဒီ ပြဿနာက စိုးရိမ်စရာ ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး ခုနောက်ပိုင်း ပေါ်လာတဲ့ SSDs အမျိုးအစား သစ်တွေကလည်း ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိပ်တော့ ပြဿနာ မရှိတော့ပါဘူး။ ခုနောက်ပိုင်း ပေါ်လာတဲ့ SSDs တော်တော် များများက သုံးတာကြာလာလို့ Out of date ဖြစ်နေပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ upgrade လုပ်ယူပြီး အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ write limit ရှိတယ်ဆိုတာ အကြီးအကျယ် စိတ်ပူလောက်စရာ အကြောင်းကိစ္စ တစ်ခု မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒီအောက်မှာတော့ solid-state drives တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူတို့ကို အသုံးပြုတော့မယ်ဆို လုပ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ချို့ကို အကြံပြုသွားချင်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာမှာ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေဟာ Windows ကို အသုံးပြုနေတယ်လို့ ပထမအချက်အနေနဲ့ ယူဆပြီး - ဒုတိယ အချက်အနေနဲ့ writes ထားတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက် သိပ်မများသေးတဲ့ SSDs အသစ် တစ်ခုခုကိုလည်း လတ်တလော အသုံးပြုနေတယ်လို့ ယူဆလိုက်ပါ့မယ်။ တကယ်လို့ SSDs အဟောင်းကို အသုံးပြုနေတဲ့ သူ တစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ ကိုယ့် System နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြင်ဆင် လုပ်ဆောင်သင့်မယ့် တစ်ခြား အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေယူလို့ ရပါ တယ်။
အရင်ဆုံး အခြေခံ အဆင့်က စမှာမို့လို့ ကိုယ့်စက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Personal files တွေ တစ်ခြား ကိုယ့်အတွက် အသုံးလိုတာ တွေကို နောက် Drive တစ်ခုမှာ သိမ်းလိုက်ဖို့ပါ။
Solid-state drives ( SSDs )နှင့် hard disk drives ( HDDs )
SSD ကို အသုံးပြုမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အဓိက ဦးတည်ချက် ထားရမယ့် နောက်တစ်ချက် ရှိပါသေးတယ်။ အဲတာက SSD ကို system files နဲ့ applications တွေ အတွက်ပဲ အသုံးပြုဖို့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် system files နဲ့ applications တွေ အတွက် SSD ကို အသုံးပြုလိုက်တဲ့ အခါမှာ အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့ အတိုင်း boot times တွေမြန်လာမယ် - applications တွေ အသုံးပြုဖို့ ဖွင့်တဲ့ အခါမှာ အရင်လို အထနှေးတာတွေ မဖြစ်တော့ဘူး စတဲ့ ကျေးဇူးတွေ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ နောက်တစ်ခု မေးစရာ ရှိလာပါတယ်။ system files နဲ့ applications တွေ အတွက်ပဲ SSD ကို သုံးဖို့ အကြံပြုတာလဲ ?? ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် SSDs တွေက သာမန် ကျွန်တော်တို့ သုံးနေကျ hard disk drive တွေထက် ဈေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရှိသမျှဖိုင်တွေ Data တွေအားလုံး သိမ်းဆည်းဖို့ ပမာဏများတဲ့ SSDs ကို ငွေအများကြီး ပေးပြီး ဝယ်မယ့် အစား - OS files တွေ ထားဖို့ ( ဆိုလိုတာ Windows တင်ဖို့ - applications ဖိုင်တွေ ထည့်သွင်းဖို့ ) အတွက်လောက်ပဲ သာမန် ပမာဏလောက်နဲ့ SSDs ကို ဝယ်ပြီး နောက် တစ်ခြား Data တွေ ( ဥပမာ - ဗွီဒီယိုကား - ဓာတ်ပုံ - သီချင်း စသဖြင့် ) သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားဖို့ အတွက်တော့ magnetic drive လို့ ခေါ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ လတ်တလော သုံးနေကျ hard disk drive တစ်လုံးကို ဝယ်လိုက်ပါ။ ခုခေတ်မှာ magnetic drive တွေက တော်တော် ဈေးပေါနေပါပြီ။
ခုလိုမျိုး system files နဲ့ applications တွေ အတွက် SSDs ကို သုံးခိုင်းပြီး တစ်ခြား Data တွေသိမ်းဖို့ကျ magnetic drive ကို သုံးခိုင်းတဲ့ အကြံပြုချက်ဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် လုပ်ဆောင်ဖို့ မလွယ်ကူနိုင်ဘူး ဆိုတာ ကျွန်တော်လည်း သဘောပေါက် ပါတယ်။ Desktop users တွေ အတွက်တော့ ဒီ လုပ်ငန်းစဉ်က လုပ်ဆောင်ရတာ သိပ်ပြီး ခက်ခဲစရာ မရှိပါဘူး။ လဲရ ဖယ်ရ တပ်ဆင်ရတဲ့ အလုပ်ပိုလေး နဲနဲ ရှုပ်တာကလွဲရင် သိပ်ပြီး Technical ပိုင်း မရှိလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ laptop users တွေ အတွက်တော့ Drives နှစ်ခု တပ်ဖို့ဆိုတာ နဂို ကိုယ့် laptops တွေကို mod လုပ်ဖို့ လိုလာပါတယ်။ ဒါတောင် Laptops တိုင်း ရတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ( netbook users ကတော့ ရကို မရတာပါ။ ) ဒါ့ကြောင့် ခုဆက်ပြီး ဖော်ပြမယ့် အကြောင်းအရာဟာ တပ်ဆင်လုပ်ဆောင်ရ လွယ်ကူမယ့် Desktop users တွေ အတွက်ပဲ အဓိက ဦးတည်ပြီး ဖော်ပြသွားပါ့မယ်။
Windows7အား အသုံးပြုပါ။
Windows7ကို ဘာကြောင့် အသုံးပြုခိုင်းရသလဲ ဆိုရင် Windows7မှာ SSDs အတွက် အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ features တွေ များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုရင် ဥပမာ အနေနဲ့ TRIM command - defragmentation ကို disable လုပ်ဆောင်နိုင်မှု နဲ့ Superfetch ကို disable လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေ တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေက XP နဲ့ Vista ကိုပဲ အသုံးပြုနေကြတယ် ဆိုရင်တော့ Windows7ကို Upgrade လုပ်ပြီး အသုံးပြုကြဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
တကယ်လို့ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် Windows XP ကိုပဲ ဆက်သုံးမယ် ဆိုရင်လည်း Windows ကို clean install လုပ်ဆောင်ပြီး partition ကို သေသေချာချာ စီစဉ်ပိုင်းဖြတ်ဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဒါက SSDs သုံးမယ်ဆိုရင် Performance ပိုင်း ဆိုင်ရာအတွက် အရေးအကြီးဆုံး ပြင်ဆင်မှု တစ်ခုပါ။ Partitions ပြင်ဆင်မှု မမှန်ကန်ရင် Drive ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလည်း လျော့ကျစေ ပါတယ်။ Partitions ပြင်ဆင်မှု ကို ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာ အသေးစိတ် ဖော်ပြထားတဲ့ Guide က OCZ Forum မှာ ရှိပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ပါ။
Sleep အစား Hibernation ကို သုံးပါ။
Hibernation ကို အသုံးပြုတယ်ဆိုတာ laptops တွေ အတွက်တော့ battery စားနှုန်း တော်တော်သက်သာစေပါတယ်။ Hibernation နဲ့ Sleep mode ရဲ့ ကွာခြားချက်က ဘာတွေလဲ - ဘယ်အခြေအနေမှာ Sleep mode ကို သုံးပြီး ဘယ်အခြေ အနေမှာ Hibernation mode ကို အသုံးပြုလဲ ဆိုတာ အသေးစိတ် ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ အလွယ်မှတ်မယ် ဆိုရင် တော့ Sleep mode ဆိုတာ အခြေအနေတွေ အားလုံးကို RAM မှာ သိမ်းပြီး - Hibernation mode ဆိုတာ အခြေအနေတွေ အားလုံးကို hard drive ပေါ်မှာ သိမ်းတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။
Windows users တွေ အတွက် hibernation ကို Enable ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အဲတာ လုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက် Command Prompt ကို administrator အနေနဲ့ Run ပြီး powercfg /hibernate on လို့ ရိုက်ပြီး Enable ပေးပါ။ အဲ့နောက်မှာ Control Panel\_Power Options ကနေ "Change when the computer sleeps" ကိုသွားပြီး အဲ့ကနေမှ တစ်ဆင့် "Change advanced power settings" ကို ထပ်သွားပါ။ အဲ့ဒီ့ကနေ Sleep setting ကို Expand လုပ်လိုက်ရင် ကိုယ့်ကွန်ပြူတာကို Hibernate လုပ်မှာလား Sleep လုပ်မှာလားဆိုတာ ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အောက်ဖော်ပြပါ ပုံက "Allow hybrid sleep" ကို Off ထားခြင်း အားဖြင့်လည်း start menu ကနေ တစ်ဆင့် Hibernate ကို ရွေးချယ်လို့ ရစေပါတယ်။
တကယ်လို့ Hibernation mode ကို မသုံးချင်တော့ဘူး - SSDs ပေါ်မှာ Space နေရာ အပိုယူတယ်လို့ ယူဆမိရင် - Hibernation ကို ပြန် off ထားလို့ ရပါတယ်။ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Command က powercfg /hibernate on ဆိုတဲ့ နေရာမှာ powercfg /hibernate off လို့ ပြောင်းရိုက်လိုက်ယုံပါပဲ။
Disk Defragmentation လုပ်ဆောင်ရန် မလိုပါ။ Disable ပေးထားနိုင်ပါသည်။ ( XP and Vista )
ကျွန်တော်တို့ ပုံမှန် magnetic drive တွေမှာ defragmentation လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာ စက်ရဲ့ performance ကောင်းလာဖို့ အတွက် data sectors တွေကို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု စုစည်းပေးတဲ့ သဘောမျိုးပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း Solid State Drives တွေမှာတော့ data တွေကို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု နီးစပ်အောင် အတူတူစုပေးလည်း သိပ်ပြီး ထူးခြားမသွားပါဘူး - ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် SSDs တွေက data တွေက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဘယ်နားရောက်ရောက် - ပဲခူး တညင်လောက်ပဲ ဝေးဝေး တစ်ပြိုင်နက်တည်း access လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် SSDs သုံးမယ်ဆိုရင် Linux လိုမျိုးပဲ Windows မှာလည်း defragment လုပ်ဆောင်ဖို့ မလိုပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် Performance ပိုကောင်းသွားအောင် defragment ကို turn off တောင်လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
ဒါကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ဆိုရင်တော့ Start menu ကနေ My Computer မှာ right click ပေးပြီး Manage ကိုသွားပါ။ အဲကနေမှ တစ်ဆင့် Services and Applications > Services ကိုဝင် Disk Defragmenter မှာ Right click ပေးပြီး Properties ကိုဆက်သွားပါ။ အဲ့နောက်မှာ General tab အောက်က Startup Type မှာ Disabled ထားပြီး OK ပေးလိုက်ပါ။
Windows7ကို လတ်တလော သုံးနေတဲ့ သူဆိုရင်တော့ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်က လုပ်ဆောင်ဖို့ မလိုပါဘူး solid-state drive အတွက် Windows7မှာ auto - turn off လုပ်ဆောင်ထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
Index များအား ပိတ်ထားပါ။
Indexing လုပ်တယ်ဆိုတာ ရှာဖွေဖို့ မလွယ်ကူတဲ့ အရာတစ်ခုခုကို အရေးပေါ်လိုအပ်လာလို့ Hard drive ပေါ်ကနေ အလျင်အမြန် ရှာဖွေချင်တဲ့ အခါ အဆင်ပြေစေအောင် ဖန်တီးပေးထားတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း indexing မရှိလည်း SSDs တွေမှာတော့ ထူးပြီး ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် SSDs တွေက System ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ files တွေအားလုံးရဲ့ database တွေကို အချိန်တိုင်း ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ပေးနေပြီး ပြောင်းလဲချက် မှန်သမျှကိုလည်း စာရင်းဇယားနဲ့ မှတ်ထားသလိုမျိုး SSDs က မှတ်သားပေးထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ခုခု လိုအပ်လာပြီ ဆိုရင် index မရှိလည်း အေးအေးဆေးဆေး လွယ်လွယ် ကူကူ ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်တာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး My Computer ကိုခေါ်ပြီး SSD ပေါ်မှာ Right click ထောက်ပါ။ နောက် Properties ကိုဝင်ပါ။ Windows ရဲ့ အောက်ခြေမှာ "Allow Indexing Service to index this disk for fast file searching" ကို uncheck ပေးပါ။ နောက် indexing ကို disable ပေးဖို့ အပေါ်မှာ ဖော်ပြပြီးခဲ့တဲ့ Computer Management က Services section ကို ပြန်သွားပါ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ Windows Search ပေါ်မှာ Right click ပေးပြီး Properties ကို ဝင်ပါ။ နောက် Startup Type ကို Disable လို့ ပေးခဲ့ပါ။
ဒီ အထက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းက " Solid-state drives ( SSDs )နှင့် hard disk drives ( HDDs ) " ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Solid-state drives ( SSDs ) နဲ့ hard disk drives ( HDDs ) ကို ကိုယ့် ရဲ့ System မှာ ယှဉ်တွဲအသုံးမပြုထားပဲ SSDs တစ်ခုတည်းမှာသာ ရှိသမျှ Data အားလုံးကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုမှ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတာမျိုးပါ။ တကယ်လို့ Drives ( ၂ ) မျိုးလုံးကို သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ indexing ကို ထူးပြီး Disable ပေးမနေပါနဲ့ - Enable အနေနဲ့သာ ထားထားလိုက်ပါ။
နာမည်ကြီးပါသည် - သို့သော် မလိုပါ
ပုံမှန် ကျွန်တော်တို့ hard disk drives ( HDDs ) တွေ သုံးတဲ့ အချိန်မှာ Superfetch ( Windows7- Vista ) တို့ Prefetcher ( Windows XP ) တို့ကို SSDs သုံးတဲ့ အချိန်မှာ Windows7က အလိုလျောက် turn off လုပ်ထားပေးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ Windows XP မှာ ပါတဲ့ Prefetcher တို့ Windows7- Vista မှာပါတဲ့ Superfetch တို့ ဆိုတာ Windows boot process နဲ့ Applications တွေရဲ့ Start up times ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ အစပျိုးနိုင်စေဖို့ Windows မှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ Memory Manager ရဲ့ Components တွေ ဖြစ်ပြီး တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က SSDs သုံးထားတယ် ဆိုရင် ဒီ စွမ်းရည်တွေက ရပြီးသားမို့လို့ Windows7က အလိုလျောက် turn off လုပ်ပေးသွားတာပါ။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က Windows Vista သုံးသူ ဆိုရင်တော့ Superfetch ကို Disable လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်ရမှာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ ဒီနေရာမှာ မဖော်ပြတော့ပါဘူး။ တကယ်လို့ လေ့လာချင်မယ် ဆိုရင်တော့ How-To Geek မှာ Windows Vista မှာ SuperFetch ကို ဘယ်လို Disable ပေးမယ် ဆိုတာ ဖော်ပြထားတာ ရှိပါတယ်။ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
SSDs မှာ Page file တွေ - Cache တွေ Write လုပ်တာကို Disable လုပ်တာကလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ ပြင်ဆင်ချက် တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီ လုပ်ဆောင်ချက်က ထင်ထားသလောက်ကြီး သိပ်အသုံးမတည့်လှပါဘူး - Tweak လုပ်တယ် ဆိုပေမယ့် တစ်ချို့ Tweak တွေက လုပ်တာထက် မလုပ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ လုပ်တာ မလုပ်တာ နောက်ထားပြီး လုပ်ရင် ဘာကောင်းမလဲ ဆိုတာတော့ page file ရဲ့ size ကို ကန့်သတ်လိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ SSDs ပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ အတွက် တကယ်အသုံးလိုမယ့် နေရာတစ်ချို့ ပိုရလာပါမယ်။ ဒါက ကောင်းကျိုးပါပဲ။ ဒါကို လုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက်ဆိုရင် Start menu ကနေ My Computer ပေါ်မှာ Right click ပေးပြီး Properties ကို ဝင်ပါ။ အဲကနေ ဘယ်ဘက်ခြမ်းက Advanced System Settings ကို ဝင်ပြီး Performance အောက်က Setting button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အဲ့နောက်မှာတော့ Advanced tab ကို ဆက်သွားပြီး Change button ကနေ တစ်ဆင့် နောက်တစ်ဆင့်ကို ဆက်ဝင်ပါ။ ပြီးရင် "Automatically manage paging file size for all drives" ကို uncheck ပေးပြီး ကိုယ်ထားချင်တဲ့ ပမာဏကို ပြောင်းထားလို့ ရပါတယ်။
ခုဖော်ပြခဲ့တာတွေ အားလုံးဟာ Solid-state drives ( SSDs ) ကို အသုံးပြုချင်တဲ့ မိသားစုဝင်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ် အောင် ပြင်ဆင်လို့ ရနိုင်မယ့် အကြံပြုချက် တစ်ချို့လောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့် ကွန်ပြူတာရဲ့ Performance ကို ဒီ့ထက် ကောင်းမွန်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ့် ပြင်ဆင်ချက်တွေလည်း ရှိနေဦးမှာ မလွဲပါဘူး - ဒါ့ကြောင့် SSDs နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကောင်းသထက် ကောင်းမွန်အောင် ပြင်ဆင်နိုင်မယ့် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်မှုလေးတွေ ရှိသေးမယ် ဆိုရင် ဒီနေရာလေးမှာ ပေါင်းပြီး မျှဝေပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။
Last edited by KznT; 13-10-2010 at 09:48 PM..
ကိုဦး, ဂတုံးလေး, သန့်ဇင်ဌေး, သုန်သုန်, ကောင်ပေါက်စ, ဇေယျာအေး, မောင်စိန်ရွှေ, အေးမင်းမောင်, blackNwhite, kyaukphyu, thetnaung87, thureinsoe, tu tu